Filed under: ရုပ်ရှင် — 21 Comments	September 27, 2009
အဲဒီအချိန်က ဒေါ်ဝင်းမင်းသန်းဟာ သီရီစင်္ကြာနှင့်စင်္ကြာကုမ္ပဏီ(Thiri Sett Kyar & Sett Kyar Co;)ရဲ့ မန်နီဂျင်းဒါရိုက်တာတစ်ဦးပါ။နောက်ပြီး ဒီဇာတ်လမ်းလေးကို ရေးတဲ့စာရေးဆရာ H. E. Bates ကလဲ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း မြန်မာပြည်ကိုနောက်ခံထားရေးဖွဲ့ထားတဲ့ အချစ်နဲ့ စစ်ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားကို ဒေါ်ဝင်းမင်းသန်းနဲ့အတူ အဲဒီအချိန်က ကမ္ဘာကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး Gregory Peck နဲ့အတူရိုက်ကူးထားတာပါ။ဒီဇာတ်ကားဟာ သူအချိန်က ကမ္ဘာကျော် Top Ten စာရင်းမှာ နှစ်အတော်ကြာအောင် တည်ရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကဲဒီလောက်နဲ့တင် ဒီဇာတ်ကားကို ကျွန်တော်ဘာကြောင့် စွဲလန်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာ သိလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားကို ကျွန်တော်နောက်ဆုံး Torrent တွေထဲမှာရှာတွေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ မြန်မာရုပ်ရှင်သမိုင်းထဲမှာ မဝင်ခဲ့ရပေမယ့် အဲဒီအချိန်တုန်းကတည်းက မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ဝင်းမင်းသန်းဟာ ကမ္ဘာရုပ်ရှင်လောကမှာတော့ ခေတ်စားသွားစေခဲ့ပါတယ်။
21 Comments: Waing
September 27, 2009 at 11:30 pm	>ရှေးဟောင်းကားလေးတစ်ကားပဲ အချိန်ရရင် တစ်ကားလုံးကြည့်လိုက်ဦးမယ် အခုလို ကြိုးစားပြီး ရှာဖွေစုဆောင်းပေးထားတာတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အားလုံးကြည့်သင့်တဲ့ ကားဟောင်းလေးပါ။
September 28, 2009 at 12:14 am	>လင့်လေးတွေ ဖော်ပြပေးလို့ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ အကိုချမ်းလင်းနေရေအဲ့ဒီကားလေး ကြည့်ချင်တာ အစအဆုံး ရှာမတွေ့လို့တကယ့် ကျေးဇူးပါပဲ
September 28, 2009 at 5:21 am	>အရင်က ကိုညီလင်းဆက် ဖော်ပြထားတာ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်
September 28, 2009 at 8:35 am	>ကျွန်တော်ကတော့ ကို ချမ်း ဆီကနေကြည့်ပြီးပြီ..တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်….
September 28, 2009 at 10:48 am	>ကြည့်ချင်လိုက်တာကောင်းမယ့်ပုံပဲနော်Wuthering Heights ကငယ်ငယ်တန်းကတီဗီမှာလာတာကြည့်ရတယ်မေ့သွားပြီဘယ်ကနေပြန်ကြည့်ရမလဲမသိဘူးသိရင်ပြောပြပေးပါဦး..နော်
September 28, 2009 at 1:03 pm	>ဒါက မူလအစ Wuthering Heights ကားပါ။ U tube ထဲကနေ ကြည့်လို့ရအောင်ပါ။http://www.youtube.com/watch?v=9BTdQ3eomP8ဒါလဲ နောက်ပိုင်းပြန်ရိုက်ထားတာပါ။http://www.youtube.com/watch?v=U5GBxmVvbE0
September 28, 2009 at 1:41 pm	>ကျေးဇူးဘဲ အစ်ကိုရေ အဲဒီကားအကြောင်းကိုစာတော.ဖတ်ဘူးတယ် ကြည်.တော.မကြည်.ဘူးဖူးအစ်ကိုရရှင်းပြ ပေးထားတာရော ဗီဒီယိုဖိုင်တွေရော တင်ပေးတဲ.အတွက်ပါ ကျေးဇူး အစ်ကိုရေ …
September 28, 2009 at 3:38 pm	>ခရမ်းရောင်လွင်ပြင်နဲ့ဒေါ်ဝင်းမင်းသန်းအကြောင်းရှာဖွေတင်ပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီကားလေးကြည့်ချင်တာကြာပါပြီ။ဘယ်မှာရှာရမှန်းမသိလို့၊ဆက်ပြီးအားပေးနေမယ်နော်။
September 29, 2009 at 5:20 pm	>ကိုချမ်းရေ အခုလို မျှဝေထားတာ ကျေးဇူးပါ။ ဒီဇာတ်လမ်းလေးကို ကြားပဲကြားဖူးတာ မကြည့်ဖူးဘူး။ အခုတော့ ကျေးဇူးနော့။ ပိတ်ရက်မှ လာကြည့်မယ်။
September 29, 2009 at 7:10 pm	>မပြန်ခင်ကြည့်သွားဦးမယ်။ ကျေးဇူးပါ ဘကြီးချမ်းရေ…
October 1, 2009 at 12:49 am	>ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်မှာပါ.. ဝေငှတဲ့အတွက် ကျေးဇူး..
October 1, 2009 at 12:50 am	>Wuthering Heights link အတွက်လည်း ထပ်ကျေးဇူးတင်၏
October 1, 2009 at 12:53 am	>ရုပ်ရှင်တွေမှတ်ထားလို့ရအောင် လင့်ခ်ချိတ်ထားခွင့်ပြုပါ..
October 3, 2009 at 11:41 am	>ကိုယ့် ညီရေ…. ခင်မင်စွာနဲ့ ပဲရင်းရင်းနှီးနှီးခေါ်လိုက်တယ်နော်… သီတင်းကျွတ်လပြည့် နေမှာပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှု အပေါင်းနဲ့ ပြည့် စုံပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါ တယ်… အခွင့် ရယင်တော့လေထန်ကုန်း ဇတ်ကားလေး ကူးချင်ပါတယ်… ကိုယ် အရူးအမူးစွဲလန်းခဲ့ ရတဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားပေါ့ ….
October 4, 2009 at 2:13 am	>အဲကား သိတာတော့ကြာဘီ။ ကြိုကြားကြိုကြားကြည့်ဖူးတယ်။ အဲအမျိုးသမီးက အင်္ဂလိပ်စာတော်တော်ကောင်းတဲ့ အပြင် ကျက်သရေရှိတဲ့ မျက်နှာနဲ့။အစအဆုံးမကြည့်ဖူးပါ။း)
October 4, 2009 at 6:18 am	>ကျေးဇူးပါဗျာ…. သိတောင် မသိဘူး.. အခုလိုဖော်ပြပေးတာ တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
October 4, 2009 at 11:53 pm	>တကယ့်အဖိုးတန်ကားလေးပဲမျှဝေတာကျေးဇူးပါ…
October 6, 2009 at 4:34 pm	>ကျေးဇူးအရမ်းတင်တယ်ဗျာ .. ဒီနေ့ ဒီကိုရောက်လာရတာ တန်သွားပြီ …
October 10, 2009 at 7:54 am	>အဲဒီမင်းသမီးကြီးအကြောင်းကို ကြားဖူးတယ်…မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါ ကိုချမ်းရေ…းဝ)
December 8, 2009 at 11:49 pm	>မကြည့်ရသေးဘူး..နောက်ရက်မှ လာကြည့်မယ်ချစ်ကိုကြီးရေ..
December 30, 2009 at 5:25 am	>အမကရုပ်ရှင်သိပ်ကြိုက်တာ ဒီလိုဂန္ဓ၀င်ဖြစ်တဲ့ ဇာတ်ကားမျိုးကို သိမ်းထားချင်ပါတယ်…အရမ်းလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်..ဒါပေမယ့် utube က ဒီမှာကြည့်လို့ရဘူး…ခင်မင်စွာဖြင့်မိုးငွေ့